Akhriso;Magacyada Xildhibaanada Puntland 65 rag ah iyo 1 dumar ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Akhriso;Magacyada Xildhibaanada Puntland 65 rag ah iyo 1 dumar ah * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhriso;Magacyada Xildhibaanada Puntland 65 rag ah iyo 1 dumar ah
By A warsame on 1st January 2019
Guddiga xallinta khilaafaadka iyo ansixinta ee Baarlamaanka Puntland ayaa ku dhawaaqay Liiska Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka dowlad Goboleedka Puntland.
Xildhibaanada cusub ee Guddiga xallinta khilaafaadka iyo ansixinta ay ku dhawaaqeen ayaa ka kooban 66 Xildhibaan, kuwaasi oo maalmaha soo socda soo dooran doona Guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka dowlad Goboleedka Puntland.
Xildhibaanadan ayaa laga soo xulay deegaanada maamulka Puntland,iyagoona shaqeyn doona 2019 ilaa iyo 2023. Waxayna isugu jiraan 49 cusub iyo 17 xubnood oo ka tirsanaa Baarlamankii hore,balse dib loo soo doortay.
Doorashada Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo la filayo inay noqoto doorashadii ugu horeysay ee ay ku tartamaan musharixiin faro badan ayaa la qorsheeyay inay dhacdo 8da bisha Janaayo ee sanadka 2019.
Halkan hoose ka aqriso magacyada xildhibaanada cusub ee Puntland.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle oo magacaabay Guddiga Qabashada Doorashada Aqalka Sare
Galmudug oo awaamiir cusub kasoo saartay amniga doorashooyinka
Wasiir Bayle oo ka qayb-galay shirka wasiirada maaliyadda ee Afrika
Qoor qoor oo la filayo inuu soo gudbiyo liiska Musharaxiinta u tartamaya kuraasta Aqalka Sare
Rooble oo aaladda fogaan aragga kula shiray Madaxda Dowlad Gobaleedyadda
Sheekh Shariif oo ka hadlayay wararka sheegaya in musharaxiinta Mudullood ay isu tanaasuleen